I-Semalt ichaza ama-Plugin we-WordPress Odinga ukugcwalisa iwebhusayithi yakho
I-plugin ku-WordPress isofthiwe equkethe imisebenzi eminingana esetshenziselwa ukuthuthukisa iwebhusayithi ye-WordPress. Ama-Plugin we-Wordpress angafaka izici ezintsha noma wandise ukusebenza kwiwebhusayithi. Bangakwazi futhi ukuzivumelanisa nezinhlobo ezahlukene zewebhusayithi ye-WordPress njengebhulogi, isayithi lomuntu siqu noma iwebhusayithi ye-Woo Commerce. Nokho, akuwona wonke ama-plugin awusizo futhi afanele ukufaka kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress.
URyan Johnson, isazi esihamba phambili se Semalt , ucacisa lapha amanye ama-plugin ebalulekile okufanele uwacabangele.
1. I-WP Rocket
I-plugin ye-caching WordPress engasethwa ngokucushwa okuncane. Iqala ekusebenzeni okuvumela iwebhusayithi yakho ukuba ilayishe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ukulayisha okusheshayo kumawebhusayithi kudonsela ngaphezulu kwe-traffic kusayithi lakho Izici ze-WP Rocket zihlanganisa ukusetha okusheshayo, isiphequluli kanye nesilondolozi sekhasi, ukuhlelwa kabusha kwe-sitemap, ukusebenzisana kwe-database, ukuhambisana kwe-multisite, ukuhambisana kwe-CloudFlare, ukuhambisana kwezilimi eziningi, ukuxhumeka kwe-inthanethi nobungane be-E-commerce..
2. Umbukiso we-Slider
Le plugin ye-WordPress ikusiza ukuba udale amafomu asebenzayo ayamemayo, ngaleyo ndlela usize abantu ukuthi bakuthinte ngaphandle kwe-imeyili yakho. Ingumakhi wokudonsa nokudonsa. Ngakho-ke, udonsela bese uphonsa umsebenzi oyifunayo, mhlawumbe imenyu ehlayo, ifomu. Ama-templates amafomu wangaphambi akhiwe ayatholakala. Izici ze-WPForm zihlanganisa ukudonsa nokwehlisa ifomu, ukwakheka kwefomu, izaziso zomsindo, ukuphathwa kokungena, ukuvikelwa kogaxekile, idatha ye-geolocation kanye nezengezo ezihlukahlukene ezifana ne-Paypal Add-on, i-Add-on, i-zapier Add-on, isignesha Engeza phakathi kwabanye.
6. I-WPBakery Visual Composer
I-WPBakery ingumakhi wekhasi omuhle kakhulu ohlanganisa nokusekela amanye ama-plugin we-WordPress. Ngalesi plugin ye-WordPress, ungakha masinyane isakhiwo oyifunayo kuwebhusayithi yakho ngokusiza ukuhudula nokwehlisa umakhi. Ihambisana ne-Woommerce futhi i-SEO friendly ngakho-ke ingasetshenziswa ezindaweni eziningi. Izici zayo ziyikhodi ehlosiwe yinto, i-multilingual ready, frontend kanye ne-backend umhleli, ukwesekwa kwesitayela sokuthunyelwe kwangokwezifiso, izihlungi zesithombe phakathi kwabanye.